♪ Snowboard Run v1.3 [Mod Money] APK + Data ♫
Game လေးကတော့ နှင်းတောထဲမှာ စကိတ်ပြိုင်စီးရမယ့် Game လေးဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။ ကစားလို့တော့အတော်လေးကောင်းပါတယ်ဗျာ။ အစပိုင်းကစားရင်တော့ စကိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အထိန်းအသိမ်းလေးတော့ နည်းနည်းခက်ခဲမှာပါ။ စိတ်ကြိုက်စကားနိုင်အောင် Hack ထားပြီးသား တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ Unlimited Money ပါ။ Game ပုံစံလေးကိုနမူနာကြည့်နိုင်ဖို့အောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြ ထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Xilisoft DVD Ripper Ultimate v7.8.1.20140505 + Patch
DVD အခွေတွေထဲမှာရှိတဲ့ Video နဲ့ Audio တွေကို Rip လုပ်ချင်သူများအတွက် Xilisoft DVD Ripper Ultimate နောက်ဆုံးထွက် Version လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Ripping လုပ်တယ်ဆိုတာက အတွဲ လိုက်ဖြစ်နေတဲ့Video , Music , Audio စတာတွေကို
မိမိခွဲထုတ်ချင်သလိုမျိုးခွဲထုတ်ပေးနိုင်တာကို ဆိုလိုတာပါ မိမိလိုချင်တဲ့ အသံဖိုင်တွေကိုပါ သီးသန့်ခွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်။ Editing လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာ။ AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264, RM, MOV, M4V, XviD, 3GP, MP3, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, OGG အပြင်အခြားသော Format ပေါင်းများစွာကို Ripping လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် iPod, iPhone, PSP, Apple TV စတာတွေအတွက်ပါ Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အတော်လေးကိုစုံလင်တဲ့ DVD Ripper တစ်ခု ပါ။ ဒီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆို ရင် အောက်မှာအသေးစိတ်ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Patch File ကိုပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဗျာ။
Xilisoft DVD Ripper Ultimate5is powerful and easy-to-use DVD ripping software with the ability of ripping DVD to almost all video and
audio formats, such as AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264, RM, MOV, M4V, XviD, 3GP, MP3, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, OGG, etc. With its powerful
Ultimate enables you to rip DVD to various portable media players supported formats. Additionally, it can help you clip video segment, crop video size, edit video effects, adjust subtitle, and add video watermark, to get the customized DVD audio and video files.
 DVD video ripper – rip DVD to video
 DVD audio ripper – rip DVD to audio
 DVD picture converter – rip DVD to picture
 Video editor – multiple editing functions
Powerful video editing functions of Xilisoft DVD Ripper Ultimate let you
freely clip and merge video segments, crop video size, edit video effects, adjust video subtitle, and add video watermark;
 Extra adapter – offer custom options
* Excellent audio and video quality. Compared with other rip software, Xilisoft DVD Ripper Ultimate rips DVD to any audio and video with better
quality beyond your imagination, like the original DVD;
မိမိသုံးနေတဲ့ Wifi ကို ဖြတ်တောက်လို့မရအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် - Wifi Protector v1.4.5 Apk 9:11 PM
Wifi တွေကိုဖြတ်တောက်ပေးတဲ့ Wifi Killer လေးတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခု လည်း မိမိရထားတဲ့ Wifi လိုင်းတွေကို မဖြတ်တောက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Wifi Protector ဆိုတဲ့ Application လေးကို ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုတော့အောက်မှာရေးပေးထားပါတယ်။ ဗျာ။ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Android OS 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Project Hera Launcher Theme v1.11 APK (May-1)
အသစ်အသစ်တွေကိုမှသုံးချင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် Project Hera Launcher Theme ဆိုတဲ့အမိုက် စား Launcher အသစ်လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
May-1 ရက်နေ့မှအသစ်ထွက်ထားတာပါ။ Background , Icon , Gadget , တွေကလည်း အမိုက်စားတွေပါဘဲ။ နမူနာကြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြထားပါတယ်ဗျာ။ အခု Launcher လေးကတော့ မြင့်တယ်နော် Android OS 4.0.3 နှင့် အထက်ဖုန်းများမှာသာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဗျာ။
TuneUp Utilities 2014 v14.0.1000.296 + Keygen
PC Cleaner, PC Tool
TuneUp Utilities ကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ မနေ့က Update ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ Operation System
တစ်ခုလုံးကို Optimize လုပ်ပေးနိုင်ပြီး PC အတွက် အသုံးတည့်စေမယ့် Tools ပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ Software တစ်ခုပါ။ System မှာရှိနေတဲ့ Error များကို
Fix လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကွန်ပြူတာရဲ့ Speed ကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆို ရင်အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Windows ® 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows
8.1 (32 and 64-bit) အားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း သုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Serial Key နဲ့ Keygen ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Softexia ScreenshotWhether you are working or gaming: TuneUp Utilities 2014 increases the performance of your PC. Programs that are used rarely
or never are tracked down, startup processes are shortened and unwanted
garbage files are eliminated. For trouble-free working on your PC.
With onlyafew clicks, you can fix typical Windows problems as easy as pie – without beingaPC expert yourself. TuneUp Utilities 2014 finds errors on data carriers and fixes them automatically – about 60 of the most frequent problems under XP, Vista, and Windows 7. TuneUp Utilities can even restore files deleted by accident – quickly, easily, and reliably.
Android User များအတွက် Launcher အလန်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Android Phone မှာ Window 8 စတိုင်တဲ့သုံးလို့ရပါပြီ အရင်တုန်းကလည်း ဒါမျိုးလေးတင်ပေးဖူးပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ပါ ဘူး Install လုပ်ပြီး တန်းသုံးရုံပါဘဲ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ စတိုင်တွေ ဘယ်လောက်လန်းလည်း နမူနာကြည့်နိုင်အောင်လို့ အောက်မှာ Screen Shoot လေးတွေကိုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။
Nurse 2013 Movie 2:40 AM
Nurse 2013 Movie လေးဖြစ်ပါတယ်။
Phone Free Call ပြောဖို့ အတွက် ခဏခဏ ကျနော် Applications တွေတင်ပေးဖြစ်ပါတယ်..နော်..:) အခုလဲနောက်တစ်ခုတင်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ။ လုံးဝ အပြတ်မိုက်တာ...
တာဇံ ၂၀၁၄ ဗီဒီယို TarZan 2014 Movie
TarZan 2014 Movie လေးတင်ပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။ ကြည့်ချင်တဲ့သူများရှိရင်အောက်မှာတိုက်ရိုတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Download ဆွဲချင်သူများကတော့ IDM ...
Divergent 2014 Movie အသစ်လေး
Divergent 2014 Movie အသစ်လေးရှာတွေ့လို့ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြည့်ချင်သူများရှိရင် အောက်မှာ တိုက်ရိုတ်ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ HD အရည်ေ...
SKY NET Apk နဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်မယ်
SKY NET Apk ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မြန်မာပြည်မှာနာမည်ရနေတဲ့ လိုင်းတစ်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်လိုင်းကောင်းကောင်းတော့ လိုအပ်တယ်ဗျာ။ဒီ APK လေ...
ဘယ်နိုင်ငံမဆို Phone အလကားပြောမယ် Messages အလကားပို့မယ် အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျနော်အခုတင်ပေးမဲ့ ပိုစ့်ကတော့ အားလုံးပဲကြိုက်ကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သိပြီးသားသူတွေ ရှိပြီးသားသူတွေအတွက်တော့ ဘ...
Captain America2The Winter Soldier 2014 Movie
Captain America2The Winter Soldier 2014 Movie လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မကြည့်ရသေးသူများရှိရင် အောက်မှာတိုက်ရိုတ် HD အရည်သွေးဖြင့် ရုပ်သံကြည...
ဘယ်နိုင်ငံမဆို အင်တာနက်လိုင်းရှိယုံနဲ့ ဖုန်း Free ခေါ်မယ်ဗျာ....
ဖုန်း Free Call ပြောလို့ရမယ် Apk တစ်ခု ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံကတော့ ဘယ်နိုင်ငံမဆိုပေါ့ ဗျာ..............မိမိဖက်က အင်တာက်လိုင်းရှ...
WEP/WPA crack with Beini 1.2.3
မိမိတို့ အနီနားက Wifi လိုင်းတွေကို ခိုးတဲ့နည်းလေးကိုကျနော် ကျနော်မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Wifi လိုင်းတစ်လိုင်...
အားလုံးပဲ စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ..:P ။ ကျနော်သူငယ်ချင်းတို့ ကို Android Application တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ သူငယ်ချင်းတို့အတွက...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကြည့်ထားသင့်သော ဗုဒ္ဓဝင် Little Buddha Movies လေး
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကြည့်ထားသင့်သော ဗုဒ္ဓဝင် Little Buddha Movies လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီ Movies ထွက်တာတော့ အတော်လေးပဲကြာပါပြီခင်ဗျာ။ ကျနော်လဲ ...
Audio Edtors 1
Fashion Catalog များ
iPhone Firmware များ
Photoshop အတွက် PSD ဖိုင်များ
Wifi လွှင့်ပေးမဲ့ ဆောလ်ဝဲ
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ၃ လုံး ဂဏန်း
ဆောလ်ဝဲတွေကို Uninstaller လုပ်ရန်အတွက်
အသစ်တင်တိုင်း FB ကနေဖတ်မယ်ဆိုLike
ပြောစရာရှိရင် Cbox မှာပြောခဲ့ပါခင်ဗျာ
Copyright © အိုင်တီအိမ်မက် | Powered by Blogger